Lithini ubungakanani obucetyiswayo bekhadi leshishini? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lithini ubungakanani obucetyiswayo bekhadi leshishini?
Lola ifani | | Idizayini yeMifanekiso, Izibonelelo
Nangona namhlanje idijithali ibonakala iyinto ebalulekileyo kuphela, Amakhadi oshishino ayaqhubeka ukuba luncedo kakhulu ukwazisa abathengi abatsha kunye namaqabane. Ukongeza, banceda ukuhambisa umfanekiso kunye nomyalezo wenkampani. OKANYEUyilo olulungileyo, lunokwenza umntu omnike umdla wento oyinikayo kuba uhambisa umfanekiso wobungcali ohambelana noko ushumayela njengenkampani.Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuba unakekele zonke iinkcukacha kwimilimitha: umbala, uhlobo lochwethezo, isitayile kwaye, ewe, ubungakanani. Kule posi sikunika umbono malunga nokuba loluphi ubungakanani obucetyiswayo bekhadi leshishini ukuze ukhethe ifomathi efanelekileyo.
1 Isikhokelo sobungakanani bekhadi leshishini
1.1 Ubungakanani obuqhelekileyo
1.2 Isisombululo, imo yombala kunye nobungakanani ngeepikseli
2 Obunye ubungakanani kunye neemilo
2.1 Amakhadi oshishino nkqo
2.2 Amakhadi eshishini asikwere
2.3 Amakhadi amancinci
2.4 Amakhadi asongiweyo
2.5 Amakhadi eshishini anemiphetho ejikeleziweyo
3 Ndikuliphi ifomathi ekufuneka ndigcine ikhadi lebhizinisi?
Isikhokelo sobungakanani bekhadi leshishini
Ngaba kukho ubungakanani obuqhelekileyo bamakhadi oshishino? E-Spain siyakujonga oko ubungakanani obuqhelekileyo bamakhadi oshishino yi-85 x 55 mm, njengoko isetyenziswa rhoqo e-United Kingdom naseNtshona Yurophu.
Nangona kunjalo, kwaye nangona ibonakala ngathi iphambene, lo mlinganiselo osemgangathweni ungahluka ngokuxhomekeke kwilizwe. Umzekelo, eUnited States naseKhanada kuyinto eqhelekileyo kubo ukuba nobukhulu obungu-88,9 x 50,8 mm. E-Rashiya nakwindawo ezininzi zase-Latin America zihlala zingama-90 x 50 mm. EJapan, eyona ixhaphakileyo kukuba banobukhulu be-91 x 55 mm.
Isisombululo, imo yombala kunye nobungakanani ngeepikseli
Ukuba usebenza neenkqubo zoyilo, unokufuna ukwazi ukuba izakuba yintoni ubungakanani bekhadi kwiiphikseli, sithini isisombululo esifanelekileyo kwaye yeyiphi indlela yemibala ekufuneka uyisebenzisile.
Ubungakanani beepikseli ngokucacileyo buya kuxhomekeka kubungakanani bekhadi, Kumfanekiso ongentla ndikushiyela isishwankathelo esifana nokuyilwa kweendlela ezahlukeneyo. Ubungakanani bamakhadi aseMelika kunye nawaseCanada (88.9 x 50.8 mm) zii-1050 px x 600 px. Umgangatho waseYurophu nase-UK zihlala zibukhulu be 1038 x 696 pixels.
Njengoko amakhadi oshishino ayilelwe ukuprintwa kubalulekile ukuba ukhumbule ukusebenza kunyel Imo yemibala ye-CMYK, hayi nge-RGB, leyo yinto esihlala siyisebenzisa xa siyila iwebhu. Okokugqibela, kuyacetyiswa ukuba ulungise isisombululo kwi-300 dpi kwiziphumo ezifanelekileyo.
Obunye ubungakanani kunye neemilo
Nangona, njengoko sele ubonile, kukho amanyathelo athile asemgangathweni, amakhadi akudala oxande awasekhoyo kuphela afumanekayo kwintengiso Kwaye kukho abo bakhetha uyilo olunobuganga kunye noyilo.
Amakhadi oshishino nkqo
Amakhadi oshishino ahlala elandela ubume obuthe tyaba. Nangona kunjalo, oku akunyanzelekanga. Ukukhetha ikhadi leshishini elithe nkqo kunokukwenza ugqame kwabanye. Ukongeza, zinomtsalane kakhulu.
Amakhadi eshishini asikwere
Ngubani othi amakhadi oshishino kufuneka abe ngoxande? Uyilo lwesikwere luhle kakhuluZintle kwaye zinika umnxeba wangoku kwinto eqhelekileyo njengekhadi. Yintoni egqithisile, Ukuba ufuna ukwahlula kwabanye, ngale ndlela kuya kuba lula ngakumbi kunendlela ethe nkqo, kuba ubume bohluke ngokupheleleyo. Umzekelo, khawufane ucinge ukuba ukwinkongolo okanye kumthendeleko, kwezi ziganeko kuyinto eqhelekileyo ukutshintshiselana ngamakhadi, ukuba umntu unamakhadi angama-20 epokothweni kwaye kulawo makhadi yeyakho kuphela isikwere, ayinakwenzeka ukuba ingabonakali phakathi koxande.
Ngaba ujonge into encinci kunekhadi eliqhelekileyo? Olu khetho lunokuba nomdla kuwe, kumakhadi amancinci anikezelwa kwimarike, ahlala enamacala amxinwa kwaye amade, uxande, kunye zilinganisa malunga ne-70 x 28 mm kunye ne-85 x 25 mm.
Olu luyilo lufezekile ukuba ufuna indawo eyongezelelweyo apho unokongeza khona ulwazi oluthe kratya. Nangona lilikhadi elikhudlwana, lihambelana ngokugqibeleleyo nobungakanani besipaji okanye ipokotho kuba lisongwe kubini.
Amakhadi eshishini anemiphetho ejikeleziweyo
La makhadi aluncedo olukhulu kwaye kukuba, xa unemiphetho ejikeleziweyo, iikona azigobi kwaye kulula ukusoloko uziphatha nazo ngaphandle kokonakalisa. Ungasifaka esi sitayile kulo naluphi na uhlobo loyilo kunye nobungakanani esithethe ngabo ngaphambili.
Ndikuliphi ifomathi ekufuneka ndigcine ikhadi lebhizinisi?
Oku kuyakuxhomekeka ekubeni uza kubaprinta phi. Ayizizo zonke iiprinta ezamkela iifomathi ezifanayo. Ndikucebisa ukuba xa usiya kuprinta uze nefayile kwi .pdf, kodwa ntoni Sukuyilahla ifayile ehleliweyo yoqobo (.ai, .psd, .idd), kwimeko apho kuya kufuneka wenze naluphi na utshintsho okanye kwimeko apho bakucela ukuba uyithumele kwelinye ilizwe ngendlela eyahlukileyo.
Emva kokucaciswa ukulungele ukufumana uyilo olugqibeleleyo, kodwa ndiza kukushiya apha ezinye iingcebiso eziluncedo nezisebenzayo ukuze uzenzele yenza ikhadi leshishini elifanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Lithini ubungakanani obucetyiswayo bekhadi leshishini?
Amakhadi oshishino oqobo
Thatha ezona zihlandlo zibalaseleyo kwaye uzimise kwimifanekiso yakho eprintiweyo